Umama ngamnye ufuna ukuba umntwana wakhe alawulwe lula ngeencwadi kunye namanani. Ngoko ke, kweli nqaku, siya kukuxelela indlela yokufundisa inkunzi i-akhawunti kunye nexesha elifanayo ukungadikibala umnqweno wokufunda. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje "Kulula kangakanani ukufundisa umntwana ukuba abale".
Kulula kangakanani ukufundisa umntwana ukuba abale? Ngomntwana oneminyaka elilodwa kunceda ukudlala imidlalo yeminwe, ukuguqa nokutshintshela iminwe kwiipenki zomntwana ekuchazeni amanani, ngenjongo yokufumana inyaniso.
Kuyimfuneko emibini kwiminyaka yebhokhwe kubalulekile ukuba uqhelane nale ngqiqo ngokuthi "enye" ​​kunye "nokuningi". Ngenxa yale nto ungathatha amacwecwe kunye neebhokisi ezimbini uze ufake efowuni yokuqala, kwaye okwesibini ugcwalise kakhulu. Kubalulekile ukubonisa ezi ngcamango ngezifundo, kuba kubonakala ukuba kulula ukuqonda iingcamango ezintsha. Kwakhona kuyimfuneko ukuchazela umntwana ukuba lo mfanekiso uthetha "zero". Ngenxa yoko, kuyimfuneko ukubonisa umntwana ukuba ukuba ukusuka kwibhokisi yokuqala ukuthatha itye elilodwa, ngoko kuya kuba nalunanto, oko kukuthi, iiflethi zero.
Emva kweminyaka emibili unokufunda amagama eenombolo kunye nomntwana, ukususela kwi-1 kuya kwe-10, ngokucacileyo kwaye ngokukhawuleza uvakalise amanani, kwaye inkunzi iya kuphinda iphinde ibuye. Emva kweemfundo ezimbalwa umntwana ufunda amagama eenombolo kwaye kuya kwenzeka ukuba uqhubele phambili ukuya ezilishumi ezilandelayo. Abantwana kulula kakhulu ukuhlaziya izinto zangempela, ngoko qwalasela ngeentaka kwiedig, iifowuni kwi-blouse, ugogo ophezulu kwibhentshi emnyango kunye nokunye okuninzi okukujikelezayo ngexesha lokuhamba.
Ukulula ukukhumbula, ukudlala nomntwana kwi-akhawunti. Iifowuni zefowuni ngenye indlela, umzekelo, uthi "enye" ​​"ezimbini", "ezintathu", "ezine", kwaye utshintshe indawo.
Xa inkwenkwe ifunda i-akhawunti phambili, qhubeka nokuqonda i-akhawunti engenayo-ezintathu, ezimbini, enye. Umzekelo, ekuhambeni uhamba phambili kwaye ngeli xesha ubala ndawonye - 1, 2, 3, kwaye xa ubuyela emva, ubale 3, 2,1. Kwaye ke inkunzi iya kudlala amanani ngokudlala kwaye ngexesha elifanayo akayi kulahlekelwa ngumnqweno, funda ngakumbi.
Ukufunda ngeenombolo zeesana ukusuka kwi-1 ukuya kwe-10 kunokuqhubeka kwiindawo ezininzi. Chaza ukuba igama elithi "dtsat" lichaza umzekelo we-10 kwaye ukuba kumntu ngamnye oqhelekileyo udibanise inhlanganisela "kwi-dtsat", ngoko ufumana amanani aphakathi kweyeshumi, 12.13, njl. Ukubonakalisa, sebenzisa iintonga zokubala, okanye iimpawu, ngaphambi kombala ngamnye kwishumi ngombala othile. Beka iintonga ezilishumi phambi kwakhe uze ufake enye ngaphezulu, uchaze umntwana ukuba iintonga ezili-11 zilele phambi kwakhe. Musa ukukhawuleza, into ephambili ukuba umntwana wakho uyaqonda umgaqo wokubunjwa kwamanani. Kwaye ngokuthe kancinci uya kufunda ukubala ukuya kuma-100, kwaye qi niseka ukuphinda uphinda izinto ezidlulileyo ngaphambi komsebenzi omtsha.
Wena kunye nosana ufunda amanani ukusuka ku-1 ukuya ku-100 kunye nale nto kufuneka ufundise umntwana kunye nokubonakaliswa kweentlobo zamanani. Thenga inani lamagneti okanye iikhabhi ezifakwe kwindawo ebonakalayo ukwenzela ukuba iinombolo zihlala ziphambi kwamehlo akho, ngoko umntwana uya kukhumbula ngokukhawuleza ukuba abukeka njani. Ukuba umntwana uya kudibanisa amanani kunye nezinto eziqhelekileyo kuye, uya kuzikhumbula ngokukhawuleza amanani ngokwabo, umzekelo, iyunithi efana nokuqwengulwa, inqanawa kwi-swan, ezine ukuya kwisihlalo, njl.
Umntwana wakho sele ekwazi ukubala? Ngoko kufuneka siqale ukufundisisa ukongeza nokukhupha, kunye nokucacisa kuye ingcamango enjengomzekelo.
Njalo sebenzisa izinto ezilungisiweyo. Ngaphambi kokuba udle iilekese ezimbalwa zibala. Tshela umntwana ukuba unayo iiswidi ze-3 kwaye ukuba uyidla enye iya kubakho iilekese ezimbini. 3-1 = 2. Kwaye ukuba kuthe tafile kuneepeyitha ezi-4 kwaye ubeke (wongeza) enye, uza kufumana ama-pears ama-5. Ngapha nje, ndixelele ukuba iipereyi ezimbini zingaphantsi kwama-5.
Emva kwexesha, fundisa umntwana ukuba ahlale engqondweni, kwaye asebenzise iminwe kunye nezinto kuphela kwimisebenzi emitsha. Bhala kunye neengxaki ezilula, umzekelo-kwisebe kwakukho i-sprorow 3, enye ibalekile, zingaphi na iintlunkulu? Ukuba awukwazi ukuyixazulula le ngxaki, cela umntwana ukuba acinge i-sparrow engqondweni yakhe, kwaye ngoko uya kukuxelela ngokuchanekileyo impendulo echanekileyo. Ukuya kwimisebenzi eyinkimbinkimbi, fundisa umntwana ukuba acacise ngokucacileyo iingxaki. Umntwana ngamnye uyakwazi ukudweba, umzekelo, itekiti kunye nezijikelezo ezimbalwa kuyo, oko kukuthi, kuya kuba ibhokisi ngeapulo, ukuba kuthethwa ukuba ungeze kulo msebenzi, uze udwebe ibhokisi yesibini kunye neyesibini, kwaye ukuba ungagqithanga, uze uphume iifles kwibhokisi. Ngaloo ndlela, intsana iyakwazi ukujamelana neengxaki zanoma yiphina inqanaba leyinkimbinkimbi.
Ngoko ukunika umntwana isigamu seyure ngosuku ukufundiswa nokufundisa izifundo ukususela kwiminyaka yobudala, uya kuqiniseka ukuba esikolweni umntwana wakho uya kuba neengxaki ezincinci kunye nokuzithemba ngakumbi ukuba uya kuphumelela. Kwaye xa ukwenza oku uza kuzisindisa wena kunye nosana lwakho ekukhunjweni okungenakuncedo nangentliziyo.
Ukulungiswa kwengqondo kwengane esikolweni
Iingcebiso kubazali malunga nokukhulisa abantwana
Izizathu zokungabikho komnqweno wesini
I-Involtini ukusuka kwi-Eggplant
Indlela yokulungisa ingxabano ngaphandle kokuxabana
U-Serdyuchka uya kudubula eHollywood
Isilungiso samadoda amazinyo ekukhanyeni